Amniga gobolka Mudug oo u eg mid faraha ka sii baxaya. – Radio Daljir
Amniga gobolka Mudug oo u eg mid faraha ka sii baxaya.
Galkacyo, June 10- Xiisado colaadeed ayaa laga dareemayaa gudaha iyo bannaanka magaalada Galkacyo kuwaasi oo daba-socda weeraradii dhimashada iyo dhaawaca gaystay ee toddobaadkaan ka dhacay xaafadda Wadajir iyo tuulada Balli-busle.
24-kii saac ee ugu danbeeyey waxaa magaalada Galkacyo gudaheeda iyo bannaankeeda aan durugsanaynba ka dhacay isku-dayo weeraro gaadmo ah, waxaana midkii ugu danbeeyey uu ahaa is-rasaasayn suuqa-weyn ee magaalada Galkacyo ka dhacay sababtayna dhimasha hal ruux iyo dhaawaca mid kaleeto.
Habeennimadii xalayna jid-gooyo ay dhigteen dabley hubaysan oo iyana ka soo tallaabay isla xaafadda Wadajir ayey rasaas ku-qabadsiiyeen labo baabuur oo kuwa xarrigada ah oo ka yimid dhinac degmada Jarriiban kuna soo jeeday Galkacyo, waxaana rasaastaas ku dhaawacmay saddex nin oo ka mid ahaa dadkii gaadiidkaasi saarnaa.
Waa gacan-qaadkii saddex-aad oo loo tirinayo in ay gaysteen dabley ku abtirsada maamulka Galmudug, mana jirto taallaabo muuqato iyo go’aamo wax ku ool ah oo laga gaaray dhacdooyinkaasi soo laab-laabtay, haddii ay ahaan lahayd maamullada iyo wax-ku-oolka bulshadaba.
Dhinaca kale waxaa aad u liita sii socosha dadaallo maamullada iyo odayaasha dhaqanku ay wadeen oo lagu doonayey daminta xiisadda colaadeed inkastoo ay wali ku hawllan yihiin.